Maxay yihiin shuruudaha ay TPLF ku xirtay xabbad joojinta? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay yihiin shuruudaha ay TPLF ku xirtay xabbad joojinta?
Hoggaamiyayaasha kacdoonka gobolka dagaalladu aafeeyeen ee Tigree, ayaa Axaddii aqbalay "Mabda'a Xabbad Jojinta" hayeeshee, waxay ku xireen shuruudo adag oo ay doonayaan in la dhaqan galiyo ka hor xabbad joojinta.
TIGRAY, Itoobiya - Qodabbada ay soo saareen waxaa ka mid ah in gobolka laga saaro ciidamada Eriteriya iyo sidoo kale dagaalyahanada ka socda Ismaamulka Amxaarada, kuwaas oo taageerayay ciidamada Itoobiya intii lagu jiray dagaalkii Sideedda bilood socday.
Jabhadda Xoraynta Dadka Tigray, Waxay sidoo kale ku baaqeen in dib loogu soo celiyo Dowladoodii Tigree ee la kala eryay dhamaadkii sanadkii hore.
Tigray waxay ahayd goob dagaal tan iyo markii Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed uu u diray Ciidanka Difaaaa Itoobiya bishii Nofeembar ee la soo dhaafay si ay u kala diraan maamulka iyo mas'uuliyiinta gobolka ee ka soo horjeedday.
Abiy, oo ku guuleystay Abaalmarinta Nobel Peace Prize 2019, wuxuu ku eedeeyay TPLF inay soo abaabuleen weerarro lagu qaaday saldhigyada ciidamada Itoobiya, hayeeshee, isku dhacyada ayaaa salka ku hayay muran siyaasadeed oo ka dhasahy doorashooyinka oo dib u dhacay.
Todobaad ka hor maanta oo kale, kooxda TPLF ayaa dib u qabsatay magaala madaxda Tigreega ee Mekele, oo ay gacanta ku hayeen ciidanka Itoobiya tan iyo 28 November.
Xukuumadda Addis Ababa ayaa isla-markiiba ku dhawaaqday xabbad joojin hal dhinac ah, hayeeshee Xoogagga kacdoonka ayaa ku gacan seyray xabbad joojintaas.
Hadda jabhaddu waxay u muuqataa in ay aqbashay heshiiska xabad joojinta, laakiin mid ka mid ah shuruudooda ayaa ah soo celinta Maamul ay Adis Ababa u aragto Dowlad fallaago ah.
Qaramada Midoobay iyo Dowlado badan ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xabad joojinta, iyo in gaar ahaan loo oggolaado gargaarka bani'aadamnimada inuu gaaro dadka rayidka ah.
Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, qiyaastii 1.7 milyan oo ruux ayaa ku barokacay dagaalkii u dhexeeyay ciidamada Itoobiya iyo jamhada TPLF, halka in ka badan 60,000 oo qaxooti ah ay ka gudbeen xadka Suudaan.
In kabadan 1,200 dhacdo oo kufsi galmo ku saleysan ayaa la soo tabiyay, halka ku dhawaad 400,000 oo qof ay ku habsatay macluul daran, waxaana hadda halis ku jira oo gacan qabad u baahan 1.8 milyan, kuwaas oo ay waajib tahy in gargaar lala gaaro, sida uu sheegay Ramesh Rajasingham, oo ah Ku-simaha Xoghayaha-Guud ee Arrimaha Bani'aadamnimada iyo Isu-duwaha Gargaarka Degdegga ah.
Shuruudaaha TPLF, waxaa ka mid ah in la dajiyo hanaan lagula xisaabtamayo (Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya) Abiy Ahmed iyo (Madaxweynaha Eritrea) Aferworki, kuwaas oo dhibaato xooggan ka geysaty gobolka Tigray.